Degso VideoStudio loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (6.90 MB)
Corel VideoStudio waa barnaamij tafatir fiidyow ah oo la socda ikhtiyaarrada gubashada DVD, kala -guur kala duwan, saamayn, taageero la wadaago YouTube, Facebook, Flickr iyo Vimeo, maktabadaha iyo sheybaarada.
Soo degso VideoStudio
Tifaftiraha fiidiyaha xirfadlaha ah ee Corel, VideoStudio, wuxuu kaa caawinayaa inaad abuurto filimo leh is-waafajin kaamil ah oo u dhexeeya wadahadalka iyo dhawaaqa asalka ah, u gubi filimadaada DVD-ga adiga oo adeegsanaya aaladda wax lagu qoro ee la dhisay, iyo inaad shaqsiyeysato fiidiyowyo leh saameyn gaar ah.
Tifaftiraha fiidiyaha wuxuu leeyahay naqshad nadiif ah wuxuuna la imaanayaa qaab dhismeed wanaagsan oo qaabeysan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa ku jira tiro badan oo ah xuduudaha tafatirka fiidiyaha. Casharrada iyo hagitaannada caawimadu waxay ka kooban yihiin faahfaahin ballaadhan oo ku saabsan habka tafatirka fiidiyaha. Qalabku wuxuu kaa caawinayaa inaad ku keydiso faylashaada maktabad. Maktabaddu waa meesha aad ku kaydin karto dhammaan noocyada shayada sida fiidyowyada, sawirrada iyo muusikada. Sidoo kale waa meel laga helo habab kala duwan, kala -guur, saamayn iyo astaamo kale oo aad ku dari karto mashaariicdaada. Waxaad ka soo dhoofsan kartaa maktabadda aad jeceshahay maktabadda, ku dar mashruuca fiidiyaha adiga oo jiidaya oo ku ridaya thumbnails -ka jadwalka, ku meelaynta cinwaanno sida aad doorbidayso, iyo qaabaynta qoraalka.Waxaad ku dari kartaa kala -guurka inta u dhexeysa fiidyowyada ama sawirrada waxaadna ka dooran kartaa ikhtiyaarro kala duwan sida hoos u dhaca ama u beddelidda sawir kale. Waxaad ku dari kartaa faylasha maqalka oo waxaad ku meeleyn kartaa booska aad doorbidayso waqtiga, gooyo muusikada oo awood u yeelo saamaynta libdinta/furitaanka.
Barnaamijku wuxuu kaloo taageeraa heerka XAVC S ee loogu talagalay kaamirooyinka ku saleysan MP4-AVC/H.264 illaa 4K 3840 21 2160 wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad u beddesho astaamaha qaabab fiidiyow oo kala duwan iyadoo la adeegsanayo habsocodyada dufcadda, isku-duwidda cinwaan-hoosaadyo hadal, hoos u dhig qayb kasta oo fiidiyaha ah, abuur filim waqti-dhiman ah. Waxay kaydin kartaa fiidyowyada la habeeyay ee AVI, MP4, WMV ama qaab faylka MOV, dhoofinta durdurrada maqalka ee qaabka WMA, waxayna abuuri kartaa faylal lagu kaydin karo aaladaha la qaadan karo sida kamaradaha, kiniinnada, taleefannada casriga ah, qalabka ciyaarta. Waxaad ku wadaagi kartaa fiidiyowyada khadka tooska ah YouTube, Facebook, Flickr iyo Vimeo oo waxaad ku gubi kartaa DVD, AVCHD iyo cajalladaha Blu-ray.
Cabirka Faylka: 6.90 MB